Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Tsy hametraka famerana ny mpizahatany rosiana i Torkia
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Rwanda Breaking News • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Turkey Breaking News • Vaovao isan-karazany
Tsy hametra fameperana ireo mpizahatany rosiana i Torkia izay antsoin'ny Fikambanana Aretina Mihanaka
Ny manam-pahefana tiorka dia tsy mikasa ny hampiditra na hanenjana ny fomba fidiovana ho an'ireo mpizahatany rosiana mandeha any amin'ny repoblika vakansy.
Nangataka fameperana ireo mpitsidika avy any Rosia ny mpitsabo aretin-tsaina tiorka.
Tsy mikasa ny hanenjana ny fameperana ny dia i Torkia.
Torkia dia nanolotra ny “mari-pankasitrahana fizahan-tany azo antoka”.
Nandritra ny faran'ny herinandro, Mehmet Ceyhan, filohan'ny Fikambanan'ny Areti-mifindra any Torkia, dia niantso "fepetra henjana momba ny mpizahatany rosiana" tonga tany Torkia tamin'ny fialan-tsasatra, "raha tsy izany tsy azo atao ny mampiato ny fitomboan'ny aretina."
Na izany aza, Ceyhan dia tsy nilaza mazava ny fomba tokony hanaovana izany ary ny antony tokony hampiharana ireo fepetra ireo amin'ireo mpizahatany avy any Russia ihany.
Raha ny filazan'ny masoivoho Tiorka any Moskoa dia tsy mikasa ny hampiditra na hanenjana ny fidiovana ho an'ireo mpizahatany rosiana mandeha any amin'ny repoblika fialantsasatra ny manampahefana Tiorka.
"Ny tompon'andraikitra ofisialy momba ny fitsaboana sy ny fizahan-tany any Torkia dia tsy mikasa ny hamepetra na hanamafisana ny fepetra ho an'ireo mpizahatany rosiana," hoy ny misiona.
Ny masoivoho dia nanala ny tatitra nanonona ny dokotera turzi aretina Mehmet Ceyhan fa mety hanenjana ny fameperana ireo mpizahatany rosiana i Turkey noho ny tranga COVID-19 mitombo ao amin'ny firenena.
“Tianay ny manamarika fa ny fanambarana nataon'Andriamatoa Ceyhan dia ny heviny manokana. Ny tompon'andraikitra ofisialy momba ny fitsaboana sy ny fizahan-tany any Torkia dia tsy mikasa ny hamepetra na hanamafisana ny fepetra ho an'ireo mpizahatany rosiana, ”hoy ny fanirahana.
"vorontsiloza mahomby amin'ny fiatrehana ireo fanamby mandritra ny areti-mandringana, noho ny rafitra fitsaboana efa mandroso sy ny fepetra noraisina tamin'ny fomba ara-potoana. Ary koa, nampahafantatra ny 'mari-pankasitrahana momba ny fizahan-tany azo antoka' izy io, izay misy fitsipiky ny filaminana sy fepetra fiarovana ilaina hiantohana ny filaminana sy ny filaminan'ny vahiny ao amin'ny firenena, ”hoy ny masoivoho nanampy.